Shabakadda Amiirnuur – Page 87
Khasaare Dhimasho iyo Burbur Gaadiid oo Ciidamada Kenya Kenya Loogu Geystay Gedo.
Khasaare kala duwan ayaa ciidamada Kenya kasoo gaaray weerar duhurnimadii maanta lagula beegsaday inta u dhaxaysa Mandheera iyo Ceelwaaq ee gobolka Gedo xilli ay socdaal ku jireen iyagoo kolonyo ah. Xarakada Al-Shabaab ayaa qarax culus la beegsatay gaari gaashaaman oo ay Kenyaatigu wateen kaasoo gabi ahaanba burburay, waxaana la xaqiijiyay […]
Dhageyso Mareykanka Gubay Guryo Dadka Shacabku Leeyihiin oo Ku Yaalla Degaanka Gamboole Ee Sh/Dhexe.
Muddo laga joogo laba maalmood, ciidamo Mareykan ah iyo kuwa calooshood u shaqeystayaal Soomaali ah oo kasoo baxay magaalada Jowhar ayaa ku duulay degaanka Gamboole, halkaasoo ay dhibaatooyin badan ka geysteen. Degaankan oo dhaca galbeedka magaalada Jowhar ayaa markii ay tageen waxay ka waaween wax shacab ah kadib markii dad […]
Faahfaahin Kasoo Baxaysa Dagaalkii Al-Shabaab Iyo Mareykanka Ku Dhex Maray J/hoose.
Xog dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa dagaal maalintii shalay ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo kaasoo dhex maray ciidamo huwan ah oo uu Mareykanku hor kuutinayay iyo milatariga Xarakada Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii ay huwantu dhaqdhaqaaq ka sameeyeen nawaaxiga Buulo-gaduud waxaana muddo kadib hardanka goobta isaga cararay shisheeyaha. Mar […]
Muslimiinta laga tiradaha badanyahay ee kunool wadanka Boorma ayaa wali lakulmaya xasuuqa uga imaanaya dhanka gaalada Buudhiyiinta xaaqidiinta ah ee sida aadka ah ula dagaallamaya faafinta diinta islaamka. Kumanaan qof ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay xasuuq soo billaawday bishii agoosto ee sanaddii lasoo dhaafay kaas oo lagu tiriyo mid […]